Dowladda New Zealand oo lacago kaalmo ah siinaysa ehalada & dadkii wax ku noqday weerarkii Jimcaha | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dowladda New Zealand oo lacago kaalmo ah siinaysa ehalada & dadkii wax...
Dowladda New Zealand oo lacago kaalmo ah siinaysa ehalada & dadkii wax ku noqday weerarkii Jimcaha
(Wellington) 17 Maarso 2019 – RW New Zealand ee Jacinda Ardern ayaa sheegtay in dowladda New Zealand ay dabooli doonto kharashaadka ku baxaya duugta dadkii lagu xasuuqay laba masjid oo ku yaalla magaalada Christchurch.
RW Ardern oo si gaar ah ula hadashay ehelada dad 50 gaaraya oo Jimcihii uu nin argagixiye ihi ku laayay masaajidyo ay ku dukanayeen salaadda Jimcaha ayay u sheegtay inay sidoo kale kaalmooyin dhaqaale siin doonaan eheladaasi, si kasta oo uu yahay qiyamkooda socdaal, kuwaasoo ay ku jiraan isla dadka dhaawacmay.
Kaalmada ay NZ siinayso ehelada dadkii ku dhintay ama ku dhaawacmay oo qaab magdhow oo kale ah ayaan kaliya socon doonin bilo, balse sanado jiri doonta sida ay sheegtay RW Ardern.
Previous articleTaajir Hindi ah oo geeriyoodey jeer uu ku jirey qalliin TIMO-TALLAALIS ah!
Next articleDHEGEYSO: Wax kasta oo aad uga baahan tahay kulanka Derby della Madonnina (Tebintii Xaaji)